Restoril (ရတ်စ်တော်ရေးလ်) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Restoril (ရတ်စ်တော်ရေးလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Restoril® သည် benzodiazepineတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Temazepam က အိပ်မပျော်သည့်ပြဿနာရှိသူများ၌ ဦးနှောက်တွင်းမှမညီမျှနေသည့်ဓါတ်ပစ္စည်းများအပေါ် အာနိသင်ပြပါသည်။
Restoril®ကိုအိပ်မပျော်သည့်လက္ခဏာများဖြစ်သောအိပ်ပျော်ရန်ခက်ခြင်း၊ အိပ်စက်မရခြင်းတို့အားကုသရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ Restoril® က ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကို နှေးသွားပြီးငိုက်မျဉ်းမှုကိုဖြစ်စေကာလူနာအိပ်ပျော်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။
Restoril (ရတ်စ်တော်ရေးလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Restoril®ကိုသင့်အားညွှန်ထားသည့်အတိုင်းသုံးပါ။ အညွှန်းစာတွင်ပါသမျှကိုလိုက်နာပါ။ Restoril®ကိုသတ်မှတ်ပမာဏ၊ အချိန်ကာလထက် ပိုသုံးခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ရ။ ဆေးအာနိသင်မပြတော့လျှင်၊ လက္ခဏာများသက်သာမလာတော့လျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
Temazepamသည် အကျင့်ဖြစ်စေတတ်၏။ ဆေးကိုတခြားသူများအထူးသဖြင့် ဆွေးစွဲဖူးသူများနှင့် မျှဝေမသုံးစွဲပါနှင့်။ Restoril®ကိုတခြားသူများမတွေ့နိုင်သည့်နေရာတွင်သိမ်းပါ။
အကျင့်ဖြစ်စေတတ်သည့်ဆေးများကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းကဆေးစွဲခြင်း၊ ဆေးလွန်ခြင်းသို့မဟုတ် သေသည်အထိ ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ ဆေးရောင်းခြင်း မျှဝေခြင်းက ဥပဒေနှင့်မညီပါ။
တစ်ညတာအိပ်စက်ဖို့အချိန်လောက်မှသာTemazepamကိုသောက်ရမည်။ မဟုတ်လျှင် မသောက်ပါနှင့်။
တစ်ချို့သောစစ်ဆေးမှုများအရဆေးကြောင့် ပုံမှန်မဟုတ်သည့်ရလဒ်များဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ Temazepamသောက်နေရပါကသင့်ကိုကုသပေးမည့် ဆရာဝန်တိုင်းကိုပြောပြပါ။
Restoril®ကိုအိပ်မရခြင်းအတွက် ရေတိုသာသုံးရပါမည်။ ဆေးစပြီးနောက် ၇-၁၀ ညအကြာထိလက္ခဏာများသက်သာမလာလျှင် သို့မဟုတ် ဆေးမှအာနိသင်ရပ်သွားပြီးအိပ်ပျော်ရန်ခက်ခြင်း၊ အိပ်စက်မရခြင်းများဖြစ်လာလျှင် ဆရာဝန်နှင့်ပြန်ပြပါ။
အချိန်ကြာကြာသုံးပြီးပါကRestoril®ကိုရုတ်တရတ် ရပ်မပစ်ရပါ။ ဆေးဖြတ်သည့်လက္ခဏာများပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ဆေးကိုရပ်လိုက်သည်နှင့် အိပ်မရသည့်လက္ခဏာများ ပြန်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ဆေးကိုစိတ်ချစွာရပ်နိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်ကိုမေးပါ။
ဆေးသုံးနေရင်းဗူးထဲကျန်နေခဲ့သောပမာဏကိုခဏခဏတွက်ပေးပါ။ Temazepamသည် အလွဲသုံးစားလုပ်ကြသည့်ဆေးဖြစ်ပြီးတစ်ယောက်ယောက်မှ သင့်ဆေးများကိုညွှန်ကြားချက်မရှိယူသောက်နေမသောက်နေကိုသတိထားနေရပါမည်။
Restoril (ရတ်စ်တော်ရေးလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Restoril® (temazepam)ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Restoril® (temazepam)ကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Restoril® (temazepam)ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းခြင်းကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။
Restoril® (temazepam)အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Restoril (ရတ်စ်တော်ရေးလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Restoril®တွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
Restoril®ကိုစိတ်ချစွာသုံးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါတို့ရှိနေပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
ပန်းနာရင်ကြပ်၊ အဆုတ်ပွခြင်းနှင့် တခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ
စိတ်ကျဖူးခြင်း၊ သတ်သေလိုသည့် အတွေးများ၊ အပြုအမူများရှိခဲ့ဖူးခြင်း
ဆေး၊ အရက် စွဲဖူးခြင်း
ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင်၊ ကိုယ်ဝန်ရှိလာလျှင် Restoril®ကိုမသုံးရပါ။ ဤဆေးကြောင့် မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်များ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ကလေးသည်လည်းဆေးစွဲလာနိုင်ပါသည်။ မွေးပြီးနောက်တွင် ကလေးအတွက် အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် ဆေးဖြတ်လက္ခဏာများပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ အကျင့်ဖြစ်စေသည့်ဆေးများကိုစွဲပြီးမွေးလာသောကလေးများတွင် အပတ်ပေါင်းများစွာဆေးကုသမှု ခံယူရနိုင်ပါသည်။ သင့်၌ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အစီအစဉ်ရှိလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။ Restoril®သောက်နေစဉ် ကိုယ်ဝန်မရစေရန် ကောင်းမွန်သည့် သားဆက်ခြားနည်းကိုသုံးပါ။
Temazepamသည် နို့ရည်ထဲသို့ဖြတ်နိုင်ပြီး နို့စို့ကလေးတွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Temazepam ၏ အိပ်ချင်စေသည့်အာနိသင်မှာအသက်ကြီးသူများတွင် ပိုကြာနိုင်ပါသည်။ Benzodiazepinesများသောက်ရသောအသက်ကြီးသူများတွင် ခဏခဏပစ်လဲခြင်းမျိုး ဖြစ်တတ်ပါသည်။ Restoril®သုံးနေစဉ် ပစ်လဲခြင်း၊ ထိခိုက်မိခြင်းမဖြစ်အောင် သတိနှင့်နေပါ။
Restoril®ကိုအသက် ၁၈ နှစ်အောက်များတွင် ခွင့်မပြုထားပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Restoril (ရတ်စ်တော်ရေးလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Restoril (ရတ်စ်တော်ရေးလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Restoril®ကြောင့် ပြင်းထန်သည့်ဓါတ်မတည့်မှု ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ဓါတ်မတည့်သည့်လက္ခဏာများ ဖြစ်သောအင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းတို့ ဖောင်းကြွခြင်းများဖြစာ်လပါကဆေးကိုရပ်ပြီးအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူရမည်။
ဤဆေးသောက်နေသူများတွင် ကားမောင်းခြင်း၊ စားသောက်ခြင်း၊ ဖုန်းခေါ်ခြင်းစသည့် လှုပ်ရှားမှုများကိုမမှတ်မိခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာပါကRestoril®အသုံးကိုရပ်ပြီးတခြားကုသမှုအကြောင်း ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Restoril (ရတ်စ်တော်ရေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Restoril® (temazepam)သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Restoril (ရတ်စ်တော်ရေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Restoril® (temazepam) က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီးဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Restoril (ရတ်စ်တော်ရေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Restoril® (temazepam)သည် လက်ရှိသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Restoril (ရတ်စ်တော်ရေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အိပ်ယာဝင်ချိန်တွင် 7.5 to 30 mgသောက်ရန်။
ညအိပ်မပျော်ခြင်းအားကုသရာတွင် 7.5 mgမှာအိပ်စက်ရနိုင်ချေအတွက် လုံလောက်ပါသည်။
လူကြီးများနှင့် အားနည်းသူများတွင် ကုသမှုကိုတုံ့ပြန်နိုင်ပုံအားဆုံးဖြတ်ပြီးသည်အထိ7.5 mg မှ စပေးသင့်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Restoril (ရတ်စ်တော်ရေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Restoril (ရတ်စ်တော်ရေးလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Restoril® (temazepam)ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆေးတောင့်: temazepam 7.5mg
Restoril® (temazepam)ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
Restoril®. https://www.drugs.com/restoril.html. Accessed September 6, 2017
Restoril®. http://www.rxlist.com/restoril-drug.html. Accessed September 6, 2017